I-Chrome ingeza umsebenzi othi "Ungalandeli" ukuthuthukisa ubumfihlo | Kusuka kuLinux
Iqembu lentuthuko isiphequluli de -Google isebenza ekuqalisweni kohlelo "Ungalandeleli" kudalwe ngu I-Mozilla futhi lokho kuvumela umsebenzisi ukuthi aveze isifiso sakhe sokuthi angalandelelwa futhi gwema ngakho-ke i- ukukhangisa okubhekiswe.
Uhlobo olulandelayo lwe-Google Chrome luzoba nomsebenzi owakhelwe ngaphakathi othi "Ungalandeleli", ovimbela umsebenzisi ukuthi abhekwe bese unikeza izikhangiso ezenziwe zaba ngezakho.
Lolu hlelo lwaluceliwe ngo-2007 yizinhlangano zabathengi baseNyakatho Melika, futhi lwaqala ukusebenza ngo-2009. Ukusebenza kwalo kuyafana ne- "Do not call registry" yezingcingo: lapho umsebenzi we-Do Not Track ususebenza, isiphequluli sazisa abasebenzisi amaseva umsebenzisi angafuni ukulandelelwa ngezinhloso zokukhangisa.
Lesi sici sesivele sitholakala kuFirefox, Internet Explorer, Opera, nakuSafari; I-Chrome ukuphela kwesiphequluli esingakayisebenzisi okwamanje. Njengenkampani eyenza imali enkulu ngokukhangisa okwenzelwe wena, iGoogle ibingakhombisanga zimpawu zokulangazelela ukuyifaka, kepha muva nje iWhite House ibambe imihlangano nabadlali be-Intanethi abaphambili, ibanxusa ukuthi bajoyine lolu hlelo. URob Shilkin, okhulumela i-Google, ukuqinisekisile ukuthi ukufakwa kwe-Do Not Track ku-Chrome kungumphumela waleyo mihlangano.
Abakhangisi abaningi bebekhathazekile ngalolu hlelo - oluzonciphisa kakhulu ukusebenza kwezikhangiso zabo, ngaleyo ndlela kunciphise imali abayitholayo - kepha njengoba i-Do Not Track ikhutshazwa ngokuzenzakalela kuzo zonke iziphequluli (futhi iGoogle izolandela indlela efanayo), bayayethemba abasebenzisi abaningi ngeke banike amandla inketho.
Kunoma ikuphi, Ukungalandeleli akuqinisekisi ubumfihlo bomsebenzisi. Uhlelo aluzivimbeli izindlela zokulandela umkhondo ezisetshenziswa yizinkampani zokukhangisa eziku-inthanethi, kepha lumane luthi umsebenzisi ufisa ukuthi angalandelelwa, ethembele ekuzibophezeleni kwezinkampani ezithintekayo ukuhlonipha intando yazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Chrome ingeza umsebenzi othi "Ungalandeli" ukuthuthukisa ubumfihlo
Hmm, uhlelo oluvimba izikhangiso alufani nolukuvimbela ukuthi uzithole
KuChromium, noma ngabe ubeka kangakanani umsebenzi owufakayo ... i-google yazi wonke amakhasi owafakayo noma kunjalo. Yivesi elimsulwa, hlola leli khasi uma ungangikholwa: http://www.srware.net/
Ukufa kwezibalo zemakethe ezifihliwe zikaGoogle !!!!
Ngokuvuselelwa kwakamuva kwe-chromium ye-linux mint, ngishayeka ngaso sonke isikhathi ... ngabe kwenzeka into efanayo kunoma ngubani? Halala!
Isivele itholakala kuzandiso (okungenani ku-Chromium). Kukhona nesandiso esibizwa nge-AdBlock, esivimba konke ukukhangisa.